Mpanakanto tsy fantatra anarana no manolotra ireo sangan'asa maizina ireo | Famoronana an-tserasera
Azontsika atao ny manakaiky kokoa ny sarin'ny olona iray aseho amin'ny tsy fantatra anarana amin'ny tambajotra izy io amin'ny tambajotra hahitana ny kanto misy azy izay mamolavola ny lafiny maizin'ny zanak'olombelona na ireo toe-pihetseham-po izay amin'ny faritra sasany amin'ny fiainana tsy maintsy andalovantsika izy ireo, dia zavatra manaitaitra sy manintona tokoa, farafaharatsiny avy amin'ny fahalalako ny zavatra .
Izany no antony itondrako ity mpanakanto ity amin'ny anarana tsy fantatra izay mampiseho antsika avy ny maizina asany fa ao ambadik'io tsiky io dia misy haizina lehibe hita na ao anatin'io fiheverana ambony ny fanekena ny tena io dia afaka milentika amin'ny alàlan'ny famoizam-po tanteraka. Mpanakanto iray avy amin'ny anarana tsy fantatra anarana izay mikaroka ireo andalana maizin'ny fanahy, ny fihevitr'olombelona ary ny fihetsem-po.
Zatra mampifandray ny hatsaran-tarehy amin'ny kanto kanto isika, saingy mijery jeneraly lehibe izahay, manana Francisco Goya izahay fa nanana ny vanim-potoana mainty lehibe niainany izy, izay tamin'ny fomba an-tsary fotsiny, izay nanodidina azy tamin'ny fiainana.
Ny kiakan'i Munch, toy ny fanamaivanana sy fihenanam-po, izay mitarika antsika mankamin'ny hadalana na tsy fahalalana. Azontsika atao ny manatona an'ity mpanakanto ity izay natolotry ny horonan-tsarin'i Geiger sy Tool ary ny fahatsapany fa voafandriky ny haizina izy ary tamin'io fomba mangatsiaka nampatahotra sy nahasarika ny mpijery io, zavatra iray mitranga amin'ireo andian-tsary maizina izay izarantsika avy amin'ny ireo andalana ireo.
Raha te-hanolotra rohy mankany amin'ny asanao aho, Imgur avy any Ity rohy ityary eto iray hafa. Dingana iray amin'ny sain'ny olombelona ary amin'ny alàlan'ny sisiny maizina indrindra izay matetika tsy mora ny maneho azy raha tsy anontaniana momba ny toe-tsaina ananan'ny olona maneho azy ireo. Toy ny hoe tsy manana zavatra ao ambadik'ilay miafina ilay sary hosodoko, angamba Tontolo sambatra.
Ao amin'ny macabre ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fomba mandrisika hisamborana ny mpijery amin'ny mpanakanto tsy fantatra
PHP 7 dia efa nivoaka izao ary izany no fanavaozana lehibe indrindra tao anatin'ny taona maro